Hollaback!Fampiasaina finday hisorohana ny herisetra eny an-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2011 14:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, Italiano, polski, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Hollaback! dia vohikala iray ahafahan'ny rehetra manao tatitra ‘herisetra fanorisorenana’ eny an-dalam-be amin'ny alalan'ny finday. Voafaritra toy ny hetsika ny “Hollaback” fa tsy fitaovana na karazam-pitaovana fotsiny!:
Hollaback! dia hetsika iray natao hampitsaharana ny ‘herisetra fanorisorenana’ eny an-dalam-be amin'ny alalan'ny finday. Ny ‘herisetra fanorisorenana’ eny an-dalam-be no endrika fanehoana herisetra amin'ny vehivavy izay hita manerana izao tontolo izao ary anisan'ny tsy ahitana fanafany indrindra. Mahazo isan'andro ny ankamaroan'ny vehivavy sy ireo tia ny mitovy fananahana aminy(LGBTQ) ny fanamarihana toy ny hoe “Mahafinaritra ahy ny mijery anao” izay miantefa amin'ireo mampidera vatana, ao ireo voakitikitika sy voahetraketraka mihitsy . Fa tsy dia misy mpanao tatitra loatra izy io, no sady mbola tsy nekena ara-koltoraly toy ny ‘ vidiny efaina’ amin'ny maha vehivavy anao sy ny maha olona tia ny mitovy saranga aminao. Tsy azo ekena izany ao amin'ny Hollaback!.
Tranga tsy mbola fahita tany aloha ahafahana mampitsahatra herisetra fanorisorenana eny an-dalam-be ny fisian'io “firoboroboana tampoka ara-teknolojia tamin'ny alalan'ny finday io”. Namporisika ny vehivavy manerana izao tontolo izao mba hampiasa an'ireo fitaovana eo am-pelantanan'izy ireo ireo io tetikasa io mba hahafahan'izy ireo mizara ny tantarany, manao tatitra sy mamaritra ny toerana nitrangan'izany toe-javatra izany.
Miaraka amin'ny “fampiasana” smartphone, lahatsary ao amin'ny YouTube, saritany ao amin'ny Google, vondrona Facebook, kaonty Twitter ary sehatra fitorahana blaogy maro karazana, ny Hollaback! dia antso fanentanana amin'ny fiarovan-tena izay mitaky fahavitrihana avy amin'ireo mpandray anjara, izay mifototra amin'ny fahakingan-tsaina sy ny ratsam-batana eo amin'ny fampiasana aterineto sy finday, fa alohan'izany rehetra izany dia fanentanana ity eo amin'ny fanovana ny toe-tsaina mikasika ny herisetra ara-nofo eny an-dalambe.
Manolotra soso-kevitra maro ny Hollaback! eo amin'ny fomba fandraisana anjara. Niainga avy any Etazonia io tetikasa io, ary efa ampiasaina any amin'ny firenena Amerikana maro, fa raha ny teo an-toerana no resahana dia efa noforonin'ny vehivavy tany amin'ny tany toa an'i , Londres; Mumbai sy Buenos Aires, ary ny firenena toa an'i Repoblika Czech sy Frantsa ny vohikala Hollaback!
Modely tsara azo tahafin'ireo mponina miasa ao amin'ny fampielezam-baovao ny Hollaback!, ary toerana ahafahan'ny vehivavy manana finday mampitsahatra ny fahanginany sy ahafahan'izy ireo manao tatitra izy io. Mihaino ve ianareo?